Fitsangatsanganana any amin'ny Nosy Cayman | Vaovao momba ny dia
Fitsangatsanganana any amin'ny Nosy Cayman
Manana nosy mahafinaritra maro izao tontolo izao ary ny Ranomasin'i Karaiba mampifantoka paradisa be dia be io. Ohatra, Nosy Cayman, faritany britanika eo anelanelan'ny Jamaika sy ny Saikinosy Yucatan, fantatra amin'ny maha-a tax haven toerana itadiavan'ny orinasa sy ny miliera haba.
Saingy manana ny azy ny Nosy Cayman harem-pizahantany, ka anio dia ho fantatsika hoe iza izy ireo, ny endrik'izy ireo, ny kolontsainy ...
1 Nosy Cayman
2 Fizahan-tany Cayman Islands
Ireo nosy misy telo ny fitambarany ary izy ireo dia eo andrefan'ny Ranomasina Karaiba, atsimon'i Kiobà ary avaratra atsinanan'i Honduras. Momba ny Grand Cayman Island, Cayman Brac ary Little Cayman. Ny renivohitra dia ny tanànan'i George Town, ao Grand Cayman.
Ireo nosy dia inoana fa hitan'i Christopher Columbus tamin'ny taona 1503 tamin'ny diany farany. Columbus dia nanao batemy azy ireo Las Tortugas, noho ny habetsahan'ny mponina ao amin'ireny biby ireny, na dia misy koa ny alligator ary voalaza fa, avy eto, ny anarana ananan'izy ireo ankehitriny. Ny arkeology dia tsy nahita sisan-java-monina nonina talohan'ny nonenan'i Eropa, saingy tsy azo nolavina izany.
Avy eo ireo nosy Toeran'ireo piraty, mpivarotra ary mpandao ny tafik'i Cromwel, izay nanjakan'i Angletera tamin'izany. Tavela niaraka tamin'ny nosy i Angletera, niaraka tamin'i Jamaica, taorian'ny fanaovan-tsonia ny Fifanarahana tany Madrid tamin'ny 1670. Na dia paradisa ho an'ny piraty aza io fotoana io. Taty aoriana, ny varotra andevo dia nanova ny anjaran'ny nosy rehefa an'arivony no nentina avy tany Afrika.
Mandritra ny fotoana ela ny Nosy Cayman dia teo ambany fiahian'i Jamaika, hatramin'ny 1962 rehefa nahaleo tena i Jamaika. Taona vitsivitsy talohan'ny nananganana ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena amin'ireo nosy, dia nahasarika ny fizahan-tany izany. Avy eo nipoitra ny banky, ny hotely ary ny seranan-tsambo. Ara-tantara dia nosy maimaimpoana i Cayman Islands. Misy tantara tsy marina izay milaza ny faharavanan'ny sambo iray izay navotan'ireo nosy. Ny angano dia nilaza fa tamin'ny famonjena ireo dia namonjy mpikambana iray tamin'ny satro-boninahitra anglisy ary izany no antony nampanantenain'ny mpanjaka fa tsy handoa hetra ...
Ireo nosy dia tampon-kavoana misy rojo tendrombohitra ao anaty rano, ny Cayman Range na Cayman Rise. Manodidina ny 700 kilometatra miala an'i Miami izy ireo ary 366 fotsiny avy any Kiobà. Grand Cayman Island no lehibe indrindra amin'ny trio. Ireo nosy telo ireo dia namboarina tamin'ny haran-dranomasina nanarona ny tampon'ny tendrombohitra hatramin'ny vanim-potoanan'ny ranomandry, ireo sisa tavela amin'ny Sierra Maestra any Cuba. Mando tropikaly sy maina ny toetrany.
Misy vanim-potoana mando manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Oktobra ary vanim-potoana tsy misy orana manomboka amin'ny Novambra ka hatramin'ny Aprily. Tsy misy fiovana lehibe eo amin'ny mari-pana, fa ny cyclone mampidi-doza kosa dia ireo izay miampita ny Atlantika hatramin'ny Jona ka hatramin'ny Novambra.
Fizahan-tany Cayman Islands
Andao atomboka amin'ny nosy Grand Cayman. Ilay tsara tarehy Seven Mile Beachs dia ao amin'ny Top 3 toeran ny toerana satria miompana hotely sy hotely maro io. Iray ity morontsiraka haran-dranomasina amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy, tsara tarehy. Morontsiraka ampahibemaso izy io ary azo zahana an-tongotra ary na eo aza ny anarany dia 10 kilometatra ny halavany. Toerana amoron-dranomasina hafa dia North Sound, fonenan'ny ahidratsy.
George Town Tanàna mahaliana izy io miaraka amina maritrano nentin-drazana, fivarotana tsy andoavam-bola, marika manokana ho an'ny mpanankarena indrindra, nefa koa fivarotana asa-tanana sy vokatra eto an-toerana. Miampita ny nosy atsinanana ianao dia afaka mitsidika ny Valan-javaboary Queen Elizabeth II na ny Iguanas Mangas. Mba hahafantarana ny tantara eo an-toerana dia misy ny National Museum of the Cayman Islands, Teboka Rum ary ny fahafahany misitrika sy ireo hazo casuarina, ny Lapan'i Pedro St James, ilay trano tranainy indrindra amin'ireo nosy, na Tanànan'i Bodden, tanàna nosy voalohany.
Cayman Brac no toerana tsara indrindra raha tianao ny toetra fa tsy ny fivarotana tsy andoavana adidy. Manana lava-bato ho fantatra ny nosy, misy lavaka fantsakana tokony hatao snorkeling sy antsitrika, Na dia misy sambo rendrika aza dia ao ireo ala maintson'ny nosy, trano tsara ho an'ny vorona hafakely, voahitsakitsaka miaraka amin'ny lalana mankafy mitsangantsangana ... Eto ianao dia afaka tonga amin'ny alàlan'ny fiaramanidina, afaka antsasak'adiny, avy ao Grand Cayman.
Ho azy Little Cayman dia nosy lavitra, izay 16 kilometatra monja ny halavany ary iray kilometatra sy sasany ny sakany. Toerana mangina tokoa io, miaraka amin'i tora-pasika laos, hazo rofia mihetsika miaraka amin'ny rivotra, rano madio ... Afaka manofa bisikileta na scooter hitrandrahana azy ianao, milomano amin'ny rano mafana ao South Hole Sound Lagoon, tsidiho ny tahiry Pond Booby voajanahary, miaraka amina vorona an'arivony, mandehandeha anelanelan'ny haran-dranomasina na milomano ao Valan-dranomasina an-dranomasina ao amin'ny rindrin'ny ra.
Ity misy iray 1500 metatra nilatsaka ka andriamby ho an'ny mpanamory, miampy ny Fiainana an-dranomasina mahatalanjona izay miafina any amin'ny lalina izay tsy fahampian'ny taratra, antsantsa ary fano. Azonao atao ihany koa ny sahy mivoy kely amin'ny kayak ary mahatratra ny Nosy Owen, zavatra toa ilay Nosy Cayman tsy fantatra.
Ahoana no ahafahantsika mandrindra fitsidihana ny Nosy Cayman? Eny, 10 andro dia mety ho fanombohana tsara raha te handany fotoana any Grand Cayman ianao ary manandrana roa na telo andro any amin'ny nosy iray hafa. Ho an'ny toeran'i Volan-tantelyTsara izy satria misy mitaingin-tsoavaly eny amoron-dranomasina, fisakafoanana tsy miankina ary fivoriana spa any amin'ny hotely rehetra. Miresaka momba trano fandraisam-bahiny, azonao atao ny misafidy ny safidy rehetra - inklusif ary ny hafa kosa manana drafitra sakafo sy fisotroana izay aloanao isan-karazany.
Hitsidika ny Nosy Cayman Tsy ilaina ny manodina visa. Raha olom-pirenen'i Mexico, Brezila na Arzantina ianao, dia tsy izany. Y tsy mila vaksiny, amin'izao fotoana izao. Ho hitantsika eo aoriana izay mitranga amin'ny Covid. Marina fa ny ankamaroan'ny fizahan-tany dia avy any Etazonia fa afaka tonga amin'ny fiaramanidina avy any Cuba sy Honduras ihany koa ianao. Raha vantany vao tonga amin'ireo nosy ianao dia afaka mampiasa fitateram-bahoaka, fiara fitateram-bahoaka, taxi, fanofana fiara ... Raha hitsambikina eo anelanelan'ireo nosy eny na eny dia mila mandeha fiaramanidina ianao, Cayman Airways Express.
Mazava ho azy, tadidio fa eto ianao mitondra fiara amin'ny lafiny ankavia, anglisy tsara. Inona ny sandan'ny Nosy Cayman? ny Caymanian dolara, na dia ekena koa ny dolara amerikana. Ny tahan'ny fifanakalozana dia ho an'ny 1 US $ 0.80 CI $ cents. Manantena izahay fa ity fampahalalana ity dia manampy anao hieritreritra ny Nosy Cayman ho toerana mety fitsangatsanganana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Toerana fitsangatsanganana » Fitsangatsanganana any amin'ny Nosy Cayman
Plovdiv, inona no ho hita eto amin'ity tanànan'i Bulgaria ity